Sichulumancile ukukunika iSt.George's Country Retreat, indlu eyongezelelweyo ebekwe kumabala abucala,
Ijikelezwe buhlaza, igadi enendawo enemibono yeenduli neentaba.
Amagumbi amatsha, abukekayo aneefestile ezinkulu ukonwabela imbono, kunye nokukhanya kwelanga okuninzi kwendalo.Izidla ngequla ekwabelwana ngalo ngaphandle (kunye nabanini) kwaye ngaphakathi kwemizuzu emi-3 ukuqhuba ukuya kwi-WHITE STONE ekufutshane elunxwemeni engasese, iyenza le ibe yindawo efanelekileyo yokuphumla kubathandi bolwandle. Abathandi bendalo baya kubuxabisa ubumfihlo kunye nokuzola kwendawo.
Ime kwindawo yaseAgios Georgios, Alamanou. Phakathi kweelali zasePentakomo, eMonagrouili naseMoni, kumda osempuma wedolophu eselunxwemeni yaseLimassol. I-Governors Beach, malunga ne-10 min drive away, lunxweme olunentlabathi eyaziwa kakhulu kwaye lunokufikelelwa ngemoto, ibhayisekile okanye isithuthuthu.Kulo lwandle luthe thaa kukho iindidi ngeendidi zeethaveni zeentlanzi kunye neekhefi ongakhetha kuzo.Imizuzu embalwa yokuhamba. ikuzisa kwinkulungwane ye-12 iAgios Geogios Monastery. Indlu yeemonki inikezelwe kwiSaint George, eyona ngcwele idumileyo eSipro. Abakhenkethi banethuba lokuthenga izikhumbuzo ezahlukeneyo kunye neemveliso zemveli ezenziwa ngoonongendi, njengobusi, iilekese, imifuno kunye nejam. Kwilali eselumelwaneni yasePentakomo, kukho iiTavernas ezimbini kunye negrosari encinci yeemfuno zakho zemihla ngemihla. Iivenkile ezinkulu zaseLidl kwaye iMetro imalunga ne-15 min xa uqhuba. Kwakhona umgama omfutshane wokuhamba, uzisa kunxweme olude loluntu oluxhotyiswe ngokupheleleyo ngeenkonzo ezahlukeneyo kunye nobutofotofo. Ezi ziquka iibhari, iindawo zokutyela, iishawari, iiambrela kunye neendawo zokuhlala, kunye nemisebenzi yangaphandle yaselwandle. Kukwakho nentaphane yeehotele ezivumela iindwendwe ezingezizo iihotele ukuba zonwabele izibonelelo zephuli, indawo yokuzivocavoca, i-spa, iindawo zokutyela, iikhefi ngomrhumo.
♥ Ukuhlala kwakho kukwindawo efanelekileyo ukuze ufikelelo lula kuzo zonke iindawo ukuya kwezinye iidolophu zaseCyprus.
Ukusuka eSt. George's Retreat:
Isikhululo seenqwelomoya saseLarnaca = 48 km
Isikhululo seenqwelomoya sasePaphos = 65 km
Igrosari encinci ekufutshane = 5 km
Eyona taverna/ulwandle = 2 km
Iklabhu ye-SUP Limassol (Yima iklabhu yokubheqa ebekwe kwelinye lamalwandle amahle eLimassol, eSipro) = 13.5 km
Icinema ekufutshane = 13 km
IFassouri Waterpark = 32 km
I-Sayious Adventure Park (ilali yase-Asgata) = malunga ne-11 km
Iziko leMpilo Qete kunye noBuyiselo kwiSimo seSimo seSimo seSimo seSimo sesiqhelo esiNeomed = 6.5 km
★Abamkeli bakho bahlala emabaleni kwaye xa bengasebenzi, kuya kuhlala kuluyolo ukuphendula kwaye uncedise kuyo nayiphi na imibuzo onayo ngexesha lokuhlala kwakho.
ICoronavirus-Ngenxa yemeko yangoku sithatha amanyathelo ongezelelweyo ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu zikhuselekile ngokucoca okongeziweyo kwe-antibacterial ❤️